Itoophiyaan hojiif gara Gidduu Galeessa Bahaa deemuu hayyamte - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan hojiif gara Gidduu Galeessa Bahaa deemuu hayyamte
Goodayyaa suuraa Lammiileen hedduu seeraan ala jiraattu jedhamuun Saawudiirraa ari'amanii turani
Waggoota shaniif addaan citee kan ture lammiileen Itoophiyaa hojiif gara biyyoota Gidduu Galeessa Bahaa akka jalqabu Ministeerri Dhimma Hojjetaafi Hawwaasummaa beeksise.
Lammiileen Itoophiyaa hedduun gara biyyoota Gidduu Galeessa Bahaa akka Sawud Arabiyaa, Joordaan, Kuweet, Qaataariifi kanneen biroo deemuun hojjechaa turaniiru.
Haatahu malee, miidhama garaagaraaf saaxilamuun mirgi namoomaa isaanii sarbamaa akka tureefi faayidaa argachuu qaban dhabuun miidhamaaf saaxilamaa akka turan Ministeerichatti Daarektarri Kominikeeshinii Obbo Asaffaa Yirgaalem himaniiru.
Mootummaan duraan labsii hojiif biyya alaa baasuun hojiirra oolchus hanqinni labsichaa namoota seeraan ala daddabarsuuf haala kan mijeesse waan taheef akka addaa citu tahuusaa himaniiru.
Imalli seeraan alaa gara biyyoota Arabaa seeraan daanda'amaa laata?
Saawudiin lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa jiran hiikuuf
Yeroo dheeraafis mootummaan lammiilee seeraan ala jedhaman kumaatama biyyoota Gidduu Galeessa Bahaattii baasaa tureera.
Akkasumas biyyootni humna hojii biyyota kanneeniif dhiyeessaa turan kanneen leenjii gahaa qaban akka ergan himanii, kan biyya keenyaa garuu irra caalaa baadiyaa irraa waan deemaniif ogummaa guutuu illee hin qaban jedhan.
Obbo Asaffaan lammiileen keenya leenjii ogummaa gahaa fi dandeettii afaanii isa bu'uuraa malee biyyoota Gidduu Galeessa Bahaa deemaa turan yommuu achi gahan mana meeshaalee ammayyaa'aa fayyadaman,
fi teeknoloojii garaagaraa fayyadaman yeroo galan rakkina garaagaraaf saaxilamaa turan jedhan.
Kanaaf mootummaan amma qorannoo bal'aa gaggeessuun haala mirgi lammiilee kabajamuu danda'uu fi faayidaa isaanii kabachiisuun danda'amu irratti seerri qophaa'uu himan.
Dabalataan labsiin akkaataa labsametti lammiilen mirgi namoomaa isaanii eeggamee hojiif haala bobba'uu danda'an irratti biyyoota fudhatanii fi qaamota dhimmi milaallatu waliin hojii haal duree raawwachaa turuu ibsaniiru.
Akeekkachiisni LTV'f kenname 'hin jiru'
Ulaagaaleen kunneen maal fa'i?
Har'aa jalqabee imalli banaa tahu kun dogoggorri kanaan dura lammiilee Itoophiyaa mudataa turan akka hin dabalamne tahuun akka qophaa'e Obbo Asaffaan himaniiru.
Biyyootni haala labsii kanaan mootummaa Itoophiyaa waliin waliigalan bifa hojjetoota kanneen simatan irratti walii galameera jedhan.
Lammiileen biyyoota akka Sawud Arabiyaa, Kuwaataar fi Joordaan ,hojjetoota leenjii qaban simachuuf akka gaafatan himaniiru.
Keessumaa leenjii ogummaa garaagaraa, nyaata bilcheessuu fi dandeettii bu'uuraa afaanii kan qaban tahuu akka qaban himaniiru.
Leenjii ogummaa waliin wal qabateef erga baratanii qormaata gahumsa ogummaa fudhachuun kan darbanii fi yoo xiqqaate barumsa hanga kutaa saddetitti kan xumure/te tahuu akka qabu murtaa'eera jedhan Obbo Asaffaan.
Bobbiin hojii gara biyyoota Baha Giduu Galeessaa kun erga bara 2006 A.L.I addaan citee tureera.
4 Elba 2018
Quubsuma koo 7: ''Jireenya biyyarraa kan biyya Arabaatti jiraadhu anaaf wayya''
23 Onkololeessa 2017